Aragagixisada iyo Dhalinyarada Qurbajoogta Soomaaliyeed Maxaa kala heysta!? | KEYDMEDIA ONLINE
Aragagixisada iyo Dhalinyarada Qurbajoogta Soomaaliyeed Maxaa kala heysta!?
Keydmedia Online (KON) - Dowlada Mareykanka ayaa Mudo dheer waxey diirada ku heysay Dhowr Masaajid oo ku yaala Dalka Mareykanka, waxeyna ka qabteen Masaajidyadaas Dhalinyaro la hor keenay Maxkamada Mareykanka oo lagu soo eedeeyay iney Al-Shabaab ka tirsanaayeen.
Dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu eedeenayo iney ka tirsanyihiin Argagixisada ama kaba tirsan Argagixisada ayaa Mudadaan dambe soo badanaya, gaar ahaa Wadamada Yurub.
Warbixinta ayaa waxey sheegeysaa iney qaarkood ku howlanaayeen Dhaqaale Aruurinta kuwo kalenah ay ku howlanaayeen iney soo xero galiyaan Dhalinyaro Cusub.
Faadumo Axmed Cilmi oo ah Hooyo Soomaaliyeed, deganah Gobolka Virginia ee Dalka Mareykanka ayaa waxey sheegtay iney in Mudo ah raadineysay Wiilkeedii oo lagu Magacaabo Axmed Ismaaciil.
Hooyadaas oo la hadashay KEYDMEDIA ONLINE ayaa mudo 4 Bilood ah ka wabqabin meshuu ka baxay Wiilkeeda.
"Wuxuu ahaa Wiil aad u dagan, waligeynah kama shakin inuu ku lug yeelan doono Argagixisada, wuxuuna Maraayay Sanadkii ugu dambeeyay Jaamacada Qeybta Dhaqaalaha (Economics)"
"Waxaan sugeynay Qalin jabintiisi sidii Xidiga loo sugo" "Markii dambenah waxaa la ii sheegay iney wada socdeen "Axmed Wali Cali" oo ah Wiil ay Saaxiib ahaayeen oo waliba Guriga noogu imaan jiray, wiilkaasnah waxaa hada lagu sheegay inuu ku suganyahay Koofurta Soomaaliya gaar ahaan Gobolka Gedo oo ay Shabaabku ka taliyaan"
"Ma rumeysan karo in uu Wiilkeygi qabi karo dareen uu Dad Bini'aadni ah wax ku yeelo"
Markaan weydiinay iney Jiraan Hooyooyin kale oo Caruur ka maqan tahay, ayee Faadumo ku Jawaabtay: "Anigu Qofkii aan bargaranayo waan istaajiyaa oo waan weydiiyaa hadii uu igu biirin karo Macluumaad la xariira Xaalada Wiilkeyga, laakiin waxaa jira Qoysas aan aqaano oo sideyda oo kale Caruurtoodi meel ey ku sheegaan aan ka War heyn, dooneynah in la ogaado in ay Caruurtoodi ka maqan tahay"
Qeyladhaantaan kasoo yeertay Hooyo Faadumo Axmed Cilmi ayaa soo badaneysa, waxaana la qabqabtay Dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo lagu soo eedeeyay iney Xiriir la leeyihiin Argagixisada Caalamiga ah kuna xirxiran Xabsiyada Australia, Mareykanka, Ingriiska, Sweedanka iyo Jarmalka.
Arbacadii (12.12.12) ayeey aheyd markii Booliska Jarmalka ay Magaalada Bonn ku qabteen Wiil Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay inuu Dhigay Boorso ay ka buuxaan Waxyaalaha Qaraxa loo adeegsado.
Boorsadaan ayaa laga helay Goobta Tareenka laga raaco ee Magaalada Bonn, waxaana Wiilkaan oo ay Booliska Magaciisa kusoo koobeen Cumar laga arkay Video.
Waxaa jira Hal Malyan iyo bar Dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool Qurbaha oo ah Dad Nadiif ah, Waxbarta, Nabada Jecel, Isku gargaara, Aaminsanah Nabada iyo wada noolaashaha oo aysan Maskaxdooda soo mareyn iney Dad Bini'aadni ah wax yeelaan, waxaana Maantay lagu dhajiyay Shabada ah "Dhalinyaro Soomaali ah ma tahay? Argagax baad lug ku leedahay ama Noqon kartaa".
Faarax Maxamuud oo 21 Jir ah ayaa wuxuu ka Ambabaxay Dalka Jarmalka oo wuxuu u safray Dalka Ingiriiska. Markuu Heathrow Airport kasoo dagay gooni baa loo bixiyay, Qol baa la geestay Documentigii uu watay ayaa la kontroolay.
Hal Saac kabacdi ayaa loo sheegay in Documentigiisu uu yahay Sax hase ahaatee "Hadaa dooneysid in Magaalda London gashid, waxaa loo baahanahay in aad ogaaaltit in Faraha iyo Masawir indhaha ah lagaa qaado" ayaa lagu yiri Faarax.
Sumcad Xumadaasnah waxaa sababay in yar oo Jahawareertay, Maskaxdanah laga dhaqay oo Been laga dhaadhiciyay lana yiri "Hadii aad Dad Islaam ah oo aan Xaq kaa qabin waxna galabsan dishid Janaad galeysaa" Waxaana Qofqwalba oo Islaam ah ogsoonyahay in Dhiiga Islaamku Qofka Islaamka ah Xaaraan ka yahay!
Illahey kuuma baneyn in aad Qof aan Dambi kaa galin waxyeeleysid!